Faroole oo ku biiraya hogaamiye Beeleedyada qabyaalada uga qeyb gelaya shirka Kismaayo |
Faroole oo ku biiraya hogaamiye Beeleedyada qabyaalada uga qeyb gelaya shirka Kismaayo
Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi Raxmaan Faroole ayaa lagu wadaa inuu maalmaha soo socda tago magaalada Kismayo ee xarunta gobolka J/hoose si uu uga biiro rag uu kamid yahay R/wasaarihii hore ee Soomaaliya oo Kismaayo u tegay taageero qabiil.
Faroole ayaa taageero dhinaca niyada ah horey ugu muujiyey maamulka Kismaayo iyo shirka maamul u sameynta Jubooyinka ee ka socda magaaladaas, isagoo ku baaqay in la taageero shirka Kismaayo, hasa yeeshee markaan taageeradiisa ayaa waxa ay mareysaa heerkii ugu danbeeyay isaga oo kamaseyran ragga kale oo ay isku heybta yihiin ee Axmed Madoobe ku garab taagan Sameynta maamul dowlada Soomaaliya aysan raalli ka aheyn.
Shirka Kismaayo oo ay cadahay in dowlada Soomaaliya lagu diidanyahay ayaa siyaasiyiinta tegay ee hadala ka jeediyay waxaa kamid ah R/wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya, Cumar Cabdi Rashiid Cali Sahrmaarke, taliyihii hore ee Police-ka Soomaaliya, Madoobe iyo Pro. Gaandi iyaga oo maamul u sameynta gobalda Juboyinka iyo Gedo kadhigay arin qabiil gaar ah u taalla.
C/raxmaan faroole waxa uu horay heshiis ula saxiixday dowlada Soomaaliya waxaan kamid ahaa qodobadii leesla afgartay in hanaanka geedi socodka nabada Soomaaliya lesla ilaaliyo waxa ayna hadii uu booqasha Kismaayo kadhabeeyo ay dhabarjab ku tahay dowlada Soomaaliya iyada oo ay soo ifbaxayan daldaloolooyin uu faroole heshiiska u yeelayo.